သာသာနာညှိုနွမ်းစေမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ V Gastro Bar ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ မန်နေဂျာတွေကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးစဉ်
Photo - Thiha Tun/ RFA
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသား အထွေထွေမန်နေဂျာ Philip Blackwood ရဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမြသွေးက စွဲချက်တင်ထားတဲ့ ဥပဒေပုဒ်မတွေအရဆိုရင် သုံးယောက်လုံး ထောင်ဒဏ်ကျခံရဖို့ရှိတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
"ဥပဒေအရ ထောင်တော့ကျမှာပဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က ဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပုံကြီးကို ဒီဂျေပုံသဘောမျိုး သွားတင်ထားတာ၊ တစ်ခုက ၂၉၅-က နဲ့ စွဲချက်တယ်တယ်၊ နောက်တစ်ခုက ၁၈၈ နဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်၊ ဆိုင်အချိန်မတော်ဖွင့်တာတို့ဘာတို့ ပြစ်မှုကတော့ ၂၉၅ ကနှစ်နှစ်၊ ၂၉၅-က လည်း နှစ်နှစ်ချနိုင်တယ်"
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ဦးခေါင်းတော်မှာ နားကြပ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ရုပ်ပုံကို ဆိုင်ကြော်ငြာအဖြစ် အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက် facebook မှ ပျံ့နှံ့ခဲ့ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုင်ကိုချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ မန်နေဂျာ နှစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တရားစွဲခံထားရသူတွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေအဆိုအရ အဲဒီကြော်ငြာဟာ ပုံနှိပ်ပြီး ဖြန့်ဝေတာမဟုတ်ဘဲ အဲဒီဆိုင်မန်နေဂျာ Mr. Phillip ရဲ့ facebook မှာသာ တင်ထားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
V Gastro Bar ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ အထွေထွေမန်နေဂျာနဲ့ မန်နေဂျာတို့ကို အရေးယူပေးဖို့ ဗဟန်းမြို့နယ် မြို့နယ်သာသနာရေးဦးစီးမှူး ဦးရဲစိုးမြင့် နဲ့ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းမှူးက တရားလိုပြုပြီး တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအမူကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ထပ်မံစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Foreigners who work in this country, must be aware of religious belief which majority of people believing in. He may not think seriously in this matter before he had done. But I don't blame much to him coz the most responsible person is the Myanmar owner who belong this bar, whatever his regilion, he must seriously advice this guy. If he wouldn't listen, should do something to prevent this event happen. But now, nobody can help.
Dec 19, 2014 04:17 PM